Maxkamada Sare ee Kenya oo joojisay xiritaanka Dhadhaab iyo Kaakuma | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxkamada Sare ee Kenya oo joojisay xiritaanka Dhadhaab iyo Kaakuma
Go’aanka maxkamadda ayaa waxaa uu ka dambeeyay markii siyaasiyiin maxali ah gudbiyeen dacwad ka dhan ah go’aanka dowladda ku xireyo xeryahaas, iyadoo ku marmarsiyooneysa arrimaha amni la xiriira.
Maxkamadda ayaa dib u dhigtay go’aanka xukuumadda muddo 30 cisho ah.
Sidan oo kale, Kenya ayaa 2016 shaacisay in ay xireyso xeryaha Qaxootiga, hase ahaatee go’aankaas ma dhaqan gelin.
Go’aanka dowladda Kenya ayaa loo arkaa in arrimaha Qaxootiga ay siyaasadeynayo, maadaama waji gabax kala kulantay dacwaddii Soomaaliya kula gashay maxkamadda ICJ ka dib markii qeyb kamid ah biyaha wadanka ay muran gelisay Kenya.
Maxkamada Sare ee Kenya oo joojisay xiritaanka Dhadhaab iyo Kaakuma was last modified: April 9th, 2021 by Admin
Akhriso;-Xubno Soomaali ah oo guulo ka soo hoyay doorashada Gobolka Minnesota
Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegtay in kiisas Coronavirus ah laga helay deegaannadeeda
Wafdi ka socda Koonfur Galbeed oo gaaray Gaalkacyo